Vaovao - Ny teknolojia efa misy an'ny milina fanapahana kitapo FIBC misy ireto olana manaraka ireto
Ny milina fanapahana FIBC dia fantatra ihany koa amin'ny kitapo fitoeran-javatra malefaka, kitapo tonta, kitapo habaka sns sns feno kitapo fitoeram-bokatra malefaka, fantatra koa amin'ny kitapo fonosana lehibe sy taonina. Izy io dia karazana fitoeran-javatra fonosana malefaka sy malefaka, ary kitapo fitaterana volavola marobe vita amin'ny kasety azo adika azo aforitra, lamba fanodinana damina ary fitaovana malefaka hafa. Matetika izy io dia vita amin'ny polypropylene na polyethylene amin'ny alàlan'ny extrusion, fanapahana, sary, fanenomana, fanapahana ary fanjairana. Ity karazana fonosana ity dia tsy mahasoa fotsiny amin'ny fanatsarana ny fahombiazan'ny famoahana sy ny famoahana entana, fa mety koa amin'ny famonosana vovo-tsakafo sy entana goavambe. Izy io dia afaka mampiroborobo ny fenitra sy ny serialisialy ny fonosana entana betsaka, mampihena ny vidin'ny fitaterana ary manana tombony amin'ny fonosana mety, fitehirizana ary vidiny ambany. Izy io dia mety indrindra amin'ny fiasan'ny mekanika. Safidy mety indrindra amin'ny fitehirizana, fonosana ary fitaterana izy io. Izy io dia azo ampiasaina betsaka amin'ny arabe, ny lalamby ary ny fitaterana an-dranomasina ny akora betsaka toy ny simenitra, zezika, sira, siramamy, akora simika, ores sy akora betsaka hafa. Noho izany, tato anatin'ny taona vitsivitsy, ny kitapo kaontenera dia be mpampiasa amin'ny fitaterana vovoka sy entana goavambe eto amin'izao tontolo izao. Ny fisehoana sy ny fampiharana ny kitapo fitoeram-bokatra dia revolisiona kalitao amin'ny fomba famoahana sy famoahana vovoka sy entana goavambe.
Ny teknolojia misy dia misy ireto olana manaraka ireto: rehefa ampiharina ny fitaovana fanapahana lamba ho an'ny fanodinana kitapo kaontenera dia misy ny olana fa ny kitapom-paosin'ilay kitapo fanapahana kitapo dia tsy miorim-paka rehefa manapaka, ka miteraka olana ara-kalitaon'ny fanety. ary miaraka amin'izay koa, ny lamba kitapo mampita dia mety milamina mandritra ny fanetezana volo, ka mitombo ny habeny ary mihena ny kalitaony.
Ny maodely ilaina dia manome fitaovana fanapahana lamba FIBC ho an'ny fanodinana kitapo kaontenera, izay manana ny mampiavaka ny firafitra tsotra, ny finiavana mafy ary ny fihenjanana mety.
Mba hahatratrarana ny tanjona etsy ambony, ny maodelim-pitaovana dia manome izao paikady teknika manaraka izao: fitaovana fanapahana lamba ho an'ny fanodinana kitapo kaontenera, izay misy rojo fihenjanana, latabatra fanodinana ary singa raikitra. Ny tendrony ambony amin'ny latabatra fanodinana dia raikitra amin'ny rindrina mihombo, ny faran'ny ambony amin'ny zana-kazo miorina dia omena roulant tensioning amin'ny andaniny roa, ny afovoan'ny fehezam-boninkazo dia miorina amin'ny varingarina telescopic, ary ny farany ambany Ny tehina piston an'ny varingarina teleskopika dia raikitra miaraka amin'ny fanapahana Ny faran'ny ambany amin'ny latabatra fanodinana dia omena maotera mitondra fiara, ny afovoan'ny tendrony ambony amin'ny latabatra fanodinana dia omena singa voafaritra, ary ny lafiny roa amin'ny singa raikitra dia raikitra amin'ny roller mampita.